Showing २१-३० of ३,००४ items.
मिस टुरिजम ब्यूटी अफ नेपालको ताज आयुशालाई
धरान । मार्सी बियर मिस टुरिजम ब्युटी अफ नेपालको ताज सुनसरीकी आयुशा बस्नेतले पहिरिएकी छन् । धरान–८ स्थित वराह ग्रुपको सभाहलमा सोमबार राति सम्पन्न प्रतियोगितामा विजेता बनेकी बस्नेतले नगद १ लाख रुपैयाँसहित विभिन्न प्याकेज प्राप्त गरेकी छन् । प्रतियोगितामा फस्ट रनरअप झापाकी भावना खनाल बनिन् भने सेकेण्ड रनरअप मोरङकी सविना पोद्दार बनिन् । उनीहरूले क्रमशः नगद ७५ हजार र ५० हजार रुपैयाँसहित टुर प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । विजेताहरूलाई काठमाडौंको गीता एबुलेसनबाट तीन महिनाको निःशुल्क एयर होस्टेजको तालिम प्राप्त गरेको आयोजक सहारा इण्टरटेन्मेण्टका प्रमुख व्यवस्थापक सौगात रिजालले जानकारी दिए । प्रतियोगितामा
वान्स मोरले सविन हैरान
धरान । कोरोना महामारीका कारण जमघट गर्न नपाएका धरानेले शनिबार राति गृहवासी गायक सविन राईलाई पाउँदा फरक आनन्द लिए । धरानको बगरकोटस्थित एमएच लाउञ्ज एण्ड बारमा सविन स्टेज प्रवेश गर्दादेखि नै ‘सविन, सविन’ भन्दै चिच्याएका फ्यानले गीतैपिच्छे ‘वान्स मोर’ ले हैरान बनाए । धेरैपछि गृहनगर आएका उनले धराने फ्यानलाई भने, ‘म धरानमै जन्मिएँ, धरानमै हुर्किएँ, धरानमै मर्नेछु । तपाईंहरूको माया यसरी नै पाइरहुँ ।’ सविन एण्ड द फ्यारो ब्याण्डका साथ धरान आइपुगेका उनले एक दर्जन गीत पस्किए । ‘समर्पण तिम्रो, सुन्दरताको तिमी, म संसार जित्ने’ लगायतका आफ्ना लोकप्रिय गीत पस्किएका थिए । त्यसक्रममा उनले बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएक
‘खै हिजो–आज’मा बादलको यस्तो रुप
धरान । गायक नविन बजगाईंको नयाँ नेपाली पपगीत ‘खै हिजोआज’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।गायक बजगाईंकै शब्द र सङ्गीत रहेको गीतको भिडियोमा कलाकार बादल श्रेष्ठ र केञ्जल योङहाङले अभिनय गरेका छन् । हेमन तामाङको सम्पादन तथा निर्देशन रहेको भिडियोमा लागुऔषधको प्रयोगले मान्छेको जीवनमा कस्तो असर पर्छ ? भन्ने विषय प्रस्तुत गरिएको छ । कलाकार बादलले लागुऔषध प्रयोगकर्ताको भूमिकामा अभिनय गरेका छन् । एक लागुऔषध प्रयोगकर्ताले भोग्नु पर्ने आर्थिक तथा मानसिक समस्या भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको छ । लागुऔषध बारे सचेतना समेत प्रस्तुत गरिएको भिडियो नबिन बजगाईंकै च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको हो ।भिडियो :
राजेश पायल र जुनीको ‘ए साईला’ (भिडियो सहित)
धरान । गायक राजेशपायल राई र गायिका जुनी खालिङ राईको आवाजमा रहेको गीत ‘ए साईला’ को भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।सञ्जीव कोयी राईको शब्द र अनिल कोयी राईको सङ्गीत रहेको गीतको स्टुडियो लिप्सिङ भिडियो सन्जिब कोयी युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक भएको हो । ओपल स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको गीतको एरेन्ज विष्णु अधिकारीले गरेका हुन् भने विप्लव अधिकारीले रेकर्डिङ, मिक्सिङ मास्टरिङ गरेका हुन् । उक्त गीत तथा भिडियो निर्माणका लागि मकाउ स्थित विभिन्न नेपाली समुदायका जातिय संघ संस्था, तथा संगीतप्रेमीहरुले सहयोग गरेका छन् । म्युजिक भिडियोको छायांकन दिनेश पराजुलीले गरेका हुन् ।भिडियो
मिस युनिभर्सका प्रतियोगी सार्वजनिक
धरान । ‘मिस युनिभर्स नेपाल २०२१’ मा १६ प्रतियोगी भिड्ने भएका छन् । आयोजक उमङ्ग क्रिएसनले ग्राण्ड फिनालेको प्रेस पे्रजेण्टेसन कार्यक्रम गर्दै प्रतियोगीलाई सार्वजनिक गरेको हो । प्रतियोगीले उपस्थित दर्शकमाझ आफ्नो परिचय र भविश्यको उद्देश्य राखेका थिए । प्रतियोगीले आत्महत्या, यौनशिक्षा, महिनावारी, डेण्टल, महिला सशक्तिकरण, मानसिक स्वास्थ्य, बलात्कार, बालबालिकको शिक्षालगायत विभिन्न सामाजिक मुद्दाका विषयमा बनाएको २ देखि ३ मिनेट अवधिको भिडियोसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो । प्रतियोगितामा १६ बाट अब शीर्ष १० छानिनेछन् ।छनौटका लागि ५० प्रतिशत अङ्क प्रतियोगीले बनाएको भिडियो र ५० प्रतिशत आईएमई एपमा प्रतियोगीलाई
भुवनले ल्याए ‘ठूली’
धरान । हाल अमेरिकामा रहेका गायक तथा सङ्गीतकार भुवन सुप्तिहाङ राई नयाँ नयाँ गीत मार्फत स्रोतामाझ आईरहेका छन् । उनको सङ्गीतमा नयाँ गीत ‘ठूली’को भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भीम राई परदेशीको शब्द र शिव चाम्लिङको स्वर रहेको ‘ठूली’को भिडियोमा सरोज राना प्रजा र विना राउतको मुख्य अभिनय रहेको छ । भिडियोको निर्देशन गम्भीर विष्टले गरेका हुन् ।
बगरकोटको एमएचमा सविनको प्रत्यक्ष प्रस्तुति हुँदै
धरान । पप विधामा लोकप्रिय गायक सविन राईको धरानमा प्रत्यक्ष प्रस्तुति हुन लागेको छ । आउँदो शनिबार धरानको बगरकोटस्थित एमएच लाउन्ज एन्ड बारमा सविन राईसहित ब्यान्डले प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिन लागेको हो । सविनको ब्यान्ड ‘द फराओ’ को प्रस्तुति रहने छ । युवा पुस्तामाझ चर्चित राईले आफ्ना लोकप्रिय गीतसँगै नयाँ गीतहरू प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ । सिग्नेचरको संयोजनमा सविनको टिमले प्रस्तुति दिन लागेको एमएचका सञ्चालक जीवन मेन्याङ्बोले जानकारी दिए । धरानका अन्य ब्यान्डले पनि साथ दिने कार्यक्रम छ ।
भरतमणिलाई दमकमा अभिनन्दन
धरान । राष्ट्रिय कमेडी च्याम्पियन भरतमणि पौडेललाई दमकमा अभिनन्दन गरिएको छ । भर्खरै सम्पन्न कमेडी च्याम्पियन रियालिटी शोमा सर्वोत्कृष्ट प्रस्तुतिले उपाधि जित्न सफल प्लेजुङका बासिन्दा पौडेललाई स्थानीय पौडेल युवामञ्चले आइतबार अभिनन्दन गरेको अध्यक्ष थरेन पौडेलले बताए । अभिनन्दित व्यक्तित्व पौडेलले सबैको साथ, सहयोग र हौसलाका कारण आफूले उपाधि जित्न सफल भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो प्रतिभालाई निरन्तरअघि बढाएर कलाकारितालाई व्यवसायिकताको बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । भर्खरै सम्पन्न रियालिटी सोमा उपाधि जित्दै पौडेलले २५ लाख र कार प्राप्त गरेपछि उनको कमेडीको यात्रा चुलिएको थियो ।
प्रकाशित मितिः आश्विन ३१, २०७८
धरान । स्टाइल आइकन नेपाल २०२१ को उपाधि पुरुषतर्फ माटुर रेहमान र महिलातर्फ रोजी छामिछानेले जितेका छन् । उदयीमान मोडलका लागि आयोजकले स्टाइल आइकन नेपाल प्रतियोगिता गर्दै आएको छ । विजेताद्वयले नगद २५ हजार रुपैयाँसहित विभिन्न उपहार प्राप्त गरे । मस्ट ट्यालेन्टको टाइटल पनि रोजीले जितेकी छिन् । इभेन्ट बेटर ग्यालेक्सीको आयोजनामा काठमाडौंको जमलस्थित नाचघरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा ९ युवा मोडल र १९ युवती मोडलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पुरुषतर्फ फस्ट रनरअप सुजन थापा र सेकेन्ड रनरअप सन्तोष आचार्यले जितेका छन् । त्यस्तै महिलातर्फ फस्ट रनरअप सृजा खरेल र सेकेन्ड रनरअप निर्मला धितालले जिते । त्यस्तै
प्रकाशित मितिः आश्विन ३०, २०७८
धरान । गायिका निरु घिमिरेको नयाँ गीत ‘माया मेरी’ सार्वजनिक भएको छ । लोकशैलीमा तयार रहेको गीतमा सुधिर श्रेष्ठ र उषा उप्रेतीको रोमान्स रहेको छ । गीतमा गायक प्रमोद खरेलको स्वर पनि रहेको छ । गीतमा दुईजोडीको प्रेमकथा रहेको छ । सुधिर र उषाका अलवा कमल सिंह र जुना कार्कीको रोमान्स देख्न सकिन्छ । भिडियो विकल्प क्रियसनले निर्माण गरेको हो । निर्देशक मुनाल शिशिर कोइरालाले निर्देशन गरेका हुन् ।